पूर्वराजाले यसरी चर्काउँदैछन् हिन्दूवादी आन्दोलन - Dainik Nepal
पूर्वराजाले यसरी चर्काउँदैछन् हिन्दूवादी आन्दोलन
दैनिक नेपाल २०७५ कार्तिक २२ गते १०:२३
काठमाडौं, २२ कात्तिक । हिन्दूवादी आन्दोलनको तयारी गरिरहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पहलमा पटक–पटक विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पुन एकीकरणमा जुटेका छन् ।
शाहले हिन्दूवादी आन्दोलन र आवाज नेपाल बलियो बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको कोइराला कित्तालाई हातमा लिइसकेका छन् । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायतले हिन्दूवादी आन्दोलनमा साथ दिनेछन् भने स्व. नेता खुमबहादुर खड्काका पक्षधरले सदनमा पनि आन्दोलनपछिको अवस्थालाई दबाबपूर्ण हिसाबले उठाउने तयारी भएको छ ।
यसका लागि भारतीय संस्थापनले बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हिन्दूवादी कित्तालाई पार्टीबाट अलग बनाउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।